तपाईंको एप्पल वाच | अनुप्रयोगहरू डाउनलोड र स्थापना गर्ने तरीका सिक्नुहोस् म म्याकबाट हुँ
तपाईंको एप्पल वाचमा अनुप्रयोगहरू डाउनलोड र स्थापना गर्ने तरिका सिक्नुहोस्
त्यहाँ चार दिन मात्र बाँकी छ Apple Watch स्पेनमा अवतरण गर्नुहोस् र त्यसकारण हामी हाम्रो ब्लगमा एउटा लेख समर्पण गर्न चाहन्छौं जुन अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्नका लागि तपाईंले पछ्याउनु पर्ने चरणहरू देखाउँदछ र तपाईंको घडीमा स्थापना गर्नुहोस्। आईफोन वा आईप्याडको मामलामा, हामीसँग छ अनुप्रयोग स्टोर भनिने एक अनुप्रयोग जसमा हामी अनुप्रयोगहरू खोजी गर्न सक्दछौं र यदि बढि समस्या भएमा तिनीहरूलाई स्थापित गर्न सक्दछौं।
जे होस्, एप्पल वाचले उस्तै तरीकाले कार्य गर्दैन र तपाईलाई आईफोन अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्न र स्थापना गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। हामीले एप्पल वाच एप्लिकेसनहरू डाउनलोड गर्नुपर्दछ जुन हामीमा छ हाम्रो आईफोन र त्यो आईओएस .8.3..XNUMX को प्रक्षेपणबाट आएको हो, एप्पल वाच अनुप्रयोग। यो अनुप्रयोग हो जहाँ हामीले हाम्रो घडी प्रयोग गर्न सुरु गर्न चाहेको क्षणबाट प्रवेश गर्नुपर्नेछ, किनकि यो हाम्रो आईफोनसँग लिinking्क गर्ने कार्यमा छ।
यो समयको बारेमा हो कि तपाईंलाई राम्ररी थाहा छ एप्लिकेसन डाउनलोड गर्ने र तिनीहरूलाई तपाईंको एप्पल वाचमा स्थापना गर्ने प्रक्रिया कस्तो छ। यो शुक्रवार ती दिनहरूमा एक हुनेछ जहाँ हजारौं प्रयोगकर्ताहरूको स्मार्ट वाच हुनेछ र प्रयोग गर्न सुरू गर्दछ। यो गर्न, तिनीहरू आफ्नो घडिहरू सकेसम्म छिटो तयार पार्नको लागि तिनीहरू पछ्याउन पर्ने चरणहरूको बारेमा स्पष्ट हुनुपर्दछ। अनुप्रयोग स्टोरबाट अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्न तपाईंले के गर्नुपर्दछ भनेर बुझाउँदै यो ट्यूटोरियल सुरू गर्नुहोस्।
1 एप्पल वाचबाट अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्ने तरिका
2 एप्पल वाचमा अनुप्रयोगहरू कसरी स्थापना गर्ने
एप्पल वाचबाट अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्ने तरिका
तपाईले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको अनुप्रयोग खोल्नु हो Apple Watch तपाईंको आईफोनमा।
अब तपाईंले कोटीमा क्लिक गर्नुपर्नेछ "App Store".
तपाईले चाहानु भएको Find००० भन्दा बढी चाहिएको अनुप्रयोग खोज्नुहोस् जुन पहिले नै उपलब्ध छ। दिमागमा राख्नुहोस् कि यदि हामी नयाँ अनुप्रयोगहरू पत्ता लगाउन चाहन्छौं भने "खोजी" वा "अन्वेषण" वा "फिचर गरिएको" मा क्लिक गरेर तपाईं अनुप्रयोगहरूको खोजी गर्न सक्नुहुन्छ।
अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न क्लिक गर्नुहोस् "पाउनुहोस्" वा "किन्नुहोस्" यदि यो तिरेको छ।
एक पटक अनुप्रयोगहरू हाम्रो आईफोनमा डाउनलोड भएपछि, हामीले त्यसलाई एप्पल वाचमा स्थापना गर्नुपर्नेछ। अहिलेको लागि, एप्पलको स्मार्टवाच अनुप्रयोगहरू आईफोनका लागि उनीहरूको समकक्षहरूमा निर्भर गर्दछ, त्यो हो, यदि तपाईं एप्पल वाचको लागि टेलिग्राम अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने, आईफोनका लागि टेलिग्राम अनुप्रयोग स्वचालित रूपमा डाउनलोड हुनेछ किनभने यो त्यहि हो जहाँ सबै कामहरू भएको छ र एप्पल वाच अनुप्रयोग। केवल परिणाम प्रदर्शनको ख्याल राख्दछ। गिरावटमा शुरू हुँदा वाचयो २ रिलीज हुन्छ र त्यहाँ पहिले नै नेटिभ अनुप्रयोगहरू हुनेछन् र चीजहरू परिवर्तन हुनेछन्।
एप्पल वाचमा अनुप्रयोगहरू कसरी स्थापना गर्ने
तपाईंको आईफोनमा एप्पल वाच अनुप्रयोग खोल्नुहोस्।
कोटीमा क्लिक गर्नुहोस् "मेरो घडी".
एप्लिकेसनहरूको सूचीमा हामीले एप्पल वाचमा स्थापना गर्न चाहेको कुराको खोजी गर्नुपर्नेछ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र स्थापना गर्न दिनुहोस्।
त्यसपछि विकल्प सक्रिय गर्नुहोस् "एप्पल वाचमा अनुप्रयोग देखाउनुहोस्".
अनुप्रयोग स्वचालित रूपमा हाम्रो घडि संग सिंक हुनेछ र अनुप्रयोगहरू एप्पल वाचमा देखा पर्नेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल उत्पादनहरू » Apple Watch » तपाईंको एप्पल वाचमा अनुप्रयोगहरू डाउनलोड र स्थापना गर्ने तरिका सिक्नुहोस्
कार्लोस टेवल भन्यो
किन एप्लिकेसनहरू आईओएसमा डिजाइन गरिएको छ, जुन एपीएस स्टोरमा देखापर्छ र म त्यसलाई आईफोनमा डाउनलोड गर्न सक्दिन, तपाईं मलाई उनीहरू एपल वाचट4मा डाउनलोड गर्न दिनुहुन्न?
CARLOS TEVAL लाई जवाफ दिनुहोस्
टेलर स्विफ्टले एप्पललाई तल बनाउनका लागि एप्पल संगीतको बारेमा के भने
OS X 10.7 Lion पछि स्क्यानर र प्रिन्टर HP, Epson का लागि ड्राइभरहरूको नयाँ अपडेट